Wariye ku dhintay weerarkii Hotel Jazeera, halka mid kalana uu dhaawac kasoogaaray – STAR FM SOMALIA
Wariye Maxamed C/kariin oo Telefishinka Universal uga soo warami jiray Gobolka Gedo, ayaa ka mid ahaa dadkii maanta ku dhintay weerarkii ismiidaaminta ahaa, ee lagu qaaday Hotel Jazeera Ee Magaalada Muqdisho.
Waxaa kaloo weerarkaasi dadkii ku dhaawacmay ka mid ahaa Madaxii Wararka Telefishinka Universal Ee Magaalada Muqdisho, Wariye Salmaan Jamaal Saciid, oo xilligii weerarku dhacaayay ku sugnaa Hotelkaasi.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Qaranka, Maxamed Yuusuf Cismaan oo Saxaafadda la hadlay, ayaa xaqiijiyay dhimashada iyo dhaawaca labada Suxufi, ee ka tirsan Telefishinka Universal.
Wariye Salmaan Jamaal waxaa uu dhaawac ka soo gaaray dhinaca madaxa, waxaana xilligaan xaaladiisa caafimaadeed wax looga qabanayaa Isbitaalka Madiina,
War Saxaafadeed uu soo saaray Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa wuxuu si kulul uu ugu cambaareeyay weerarkaasi, wuxuuna ku sheegay mid argagaxiso, iyadoona masuuliyadda weerarkaasi ay sheegatay Al Shabaab.
“Waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan dadkii wax ku noqdey falkan argagixisonimo. Waxaana caafimaad degdeg ah u rajeynayaa dadkii ku dhaawacmey weerarkaasi waxashnimada oo aan wax shuqul ah ku lahayn diinteena saliimka ah. “ Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliya.
Madaxweynaha, ayaa hadalkiisa intaa ku daray “Waan hubaa inaan argagixisada ka adkaaneyno, marnaba ma dhacayso inay shacabka ka dhigtaan lahaysteyaal.”
Qaraxyada inta badan kadhaca koobaha lagu kulmo sida hotelada,maqaayadaha, ayaa wax yeelo kasoogaara bahda warbaahin.